Puntland Voice – Page 1011 – Codka Dalka iyo Dadka
Ciidamo ka tirsan Maamul Goboleedka Puntland oo la kala dhex dhigay Beelo ku dagaashan Magaalada Qardho.
Qardho (AB):-Wararka laga helayo Magaalada Qardho ee Xarunta Gobolka Ka kaar ayaa sheegaya in Maamulka Puntland ciidamo ka socday ay kala dhex galeen beelo halkaasi dagaalo ku dhexmareen. Saraakiil Dowlada Goboleedka Puntland ka tirsan ayaa la sheegay inay ku guuleysteen […]
Shirkii Maanta Xildhibaanada Soomaaliyeed ku yeesheen Muqdisho oo ku dhamaaday Natiijo la'aan
Kadib kulan Maanta ay Muqdisho ku yeesheen Xubnaha Baarlamaanka Dowlada KMG Soomaaliya ayaa si aan la fileyn ku dhamaaday markii qodobadii laga hadlayay ay isku afgaran waayeen Xildhibaanadu. Gudoomiyaha Baarlamaanka Shariif Xasan oo shir gudoominayay ayaa xakameyn waayay buuq iyo […]
Kaluumeysato mudo ku jiray gacanta Burcad badeeda oo Maanta la sii daayay
War ka soo baxay Dowlada Yemen ayaa lagu shaaciyay in kooxaha burcad badeeda Soomaalida ay iska fasaxeen dooni ay wateen Kaluumeysato reer Yemen ah kaasoo ay mudo bilo ah ku haysteen xeebaha Soomaaliya. Xeebaa Cadan ee Dalka Yeman ayaa doonidaasi […]
Xubnaha Baarlamaanka Dowlada KMG oo Saaka kulan ku leh Muqdisho
Muqdisho (AB):-Waxaa lagu wadaa saaka inay kulan Muqdisho ku yeeshaan xubnaha Baarlamaanka Dowlada KMG Soomaaliya kuwaasoo ku balansan xaruntooda loo yaqaan Guriga Ummada ee Muqdisho. Kulankaani oo qeyb ka ah kulamada caadiga ah ee Baarlamaanku yeesho ayaa waxaa lagu wadaa […]
Afhayeenka Ciidamada Qalabka Sida ee Dalka Uganda oo sheegay inay sii wadi doonaan howlgalada ay ka wadaan Muqdisho
Afhayeenka Ciidamada Qalabka sida ee Dalka Ugnada Col. Felix Kulayigye ayaa ka hadlay dagaaladioi u danbeeyay ee ka dhacay Muqdisho kaasoo dhibaatooyin waa weyn ay ka soo gaareen Ciidamadooda Muqdisho ku sugan,waxaana uu tilmaamay inay sii joogi doonaan Soomaaliya tan […]
SH. ABUU MANSUUR ” Mujaahidiinta Caalamka waxaan u sheegeynaa inay weeraraan oo qarxiyaan,gubaan safaaradaha ay dunida ku leeyihiin Dalalka Uganda iyo Burindi si ay ugu aargudaan walaalahooda Soomaaliyeed.
Muqdisho (AB):-Sh.Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur oo ka mid ah Mas’uuliyiinta sar sar ee Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ayaa si gaar ah ugu baaqay Muslimiinta Caalamka gaar ahaan dagaalahanada urur weynaha Alqaacida meel kasta oo ay joogaan inay weeraraan safaaradaha Dalalka Uganda […]
Madaxda Urur Goboleedka IGAD oo isku raacay in Soomaaliya ay u soo diraan Ciidamo ka socda Dalalka deris la ah
Adis-ababa (AB):-kadib kulan ay shalay ku yeesheen Magaalada Adis ababa Madaxda urur Goboleedka IGAD ayay ka soo saareen qodobo dhowr sida inay ciidamo 20,000 askari ah u soo diraan Somaaliya kuwaasoo laga keenayo dalalka deriska la ah Soomaaliya sida Itoobiya […]
Dalalka Uruguay iyo Holland oo cawada ku balansan
Mid ka mid ah kulamada semifiinalaha Koobka Aduunka ayaa lagu wadaa inay cawada isku arkaan Dalalka Uruguay iyo Holland Uruguay Vs Holland 9:30 Habeenimo Lugta Labaad ee semi fiinalaha ayaa habeen danbe waxaa ku balansan Germany iyo Germany Germany Vs […]
Daawo Sawiro muujinaya Banaanbixii Maanta Muqdisho ka dhacay ee lagu taageerayay xarakada Mujaahidiinta Alshabaab
Muqdisho (AB):-dadweyne aad u badan ayaa Maanta isugu soo baxay Magaalada Muqdisho kuwaasoo socod dheer ku soo maray wadada warshadajha markii danbana isugu tagay daarta Maslax ee duleedka xaafada suuqa xoolaha,waxayna ku taageerayeen xarakada Mujaahidiinta Alshabaab. Dadaweynaha waxa siteen […]
Kalfadhiyada 24aad ee Golaha wakiilada Maamulka Puntland oo Maanta ka furmay Magaalada Garoowe
Garoowe (AB):-Xarunta Dowlad Goboleedka Puntland ee Garoowe waxaa maanta si rasmi ah uga furmay kalfadhigii 24aad ee Golaha wakiilada Puntland. Shirarka Wakiilada ama Baarlamaanka Puntland oo 20 ciso la xirey ayaa maanta waxaa furey gudoomiyaha Barlamaanka Puntland Cabdirishiid Maxamed Xirsi […]
« Previous 1 … 1,009 1,010 1,011 1,012 1,013 … 1,044 Next »